အန်ဒါမန်ဟီးရိုး: September 2011
စက်တင်ဘာလ ၂၄ ရက်နေ့သတင်းများ
Posted by Andaman Hero at 12:29 PM0comments
စက်တင်ဘာလ ၂၂ ရက်နေ့သတင်းများ
Posted by Andaman Hero at 8:21 PM0comments
စက်တင်ဘာလ ၂၁ ရက်နေ့သတင်းများ
* စစ်မှန်သည့်အပြောင်းအလဲများရှိလာမည်ဟုဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပြော [Click]
* အရေးကြီးသည့်လယ်ယာမြေဥပဒေများအတည်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိ [Click]
* မြန်မာ့နိုင်ငံရေးဒေါ်စုအပြုသဘောရှုမြင် [Click]
* CGIညီလာခံမှာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တိုက်ရိုက်စကားပြော [Click]
* မြန်မာလွှတ်တော်ကိုအာဆီယံအသိအမှတ်ပြုမှုAIPMCစိုးရိမ် [Click]
* လယ်ယာပိုင်ဆိုင်ခွင့်ဥပဒေမူကြမ်းကိုအတည်ပြု [Click]
* အာဆီယံဥကဌမြန်မာနိုင်ငံသွားမည် [Click]
* ထားဝယ်ရေနက်ဆိပ်ကမ်းစီမံကိန်းလမ်းပိတ်ဆို့ခံရ [Click]
* မြန်မာသတင်းထောက်တွေလွတ်လပ်မှုမရှိ [Click]
* ငြိမ်းချမ်းရေးအကောင်အထည်ဖေါမယ့်သူလုပ်ကြံခံရ [Click]
* ကမ်ဘာ့စီးပွားရေးပြန်ဆိုက်နိုင်လို့IMFသတိပေပြီ [Click]
* လစ်ဗျားအသွင်ကူးပြောင်းရေးကောင်စီအိုဘားမားအသိအမှတ်ပြု [Click]
* အစ်စရေး၊ပါလက်စတိုင်းငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့ကုလအထွေထွေညီလာခံတိုက်တွန်း [Click]
* အိန်ဒိယငလျင်လူ၁၀၀ကျော်သေဆုံး [Click]
* အမေရိကန်ခြေလျင်တောင်တက်သမား၂ယောက်ပြန်လွတ် [Click]
* ဟောင်ကောင်စီးပွားရေးကမ္ဘာမှာအလွတ်လပ်ဆုံး [Click]
* အာဆီယံနိုင်ငံတချို့တွင်မြန်မာအစိုးရဘဏ်ခွဲများဖွင့်မည် [Click]
* တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ထိန်းချုပ်၍တနင်္သာရီတွင်ဆန်ဈေးတက် [Click]
* မြစ်ဆုံအရေးလွှတ်တော်ဖြင့်မလုံလောက်ဟု၁၀ပါတီပြော [Click]
* ဝီကီလိခ်ပြောတဲ့အိန္ဒိယ-မြန်မာဆက်ဆံရေး [Click]
* “မရ,ရတဲ့နည်းနဲ့ကန့်ကွက်သွားမှာပါ” [Click]
* ငြိမ်းချမ်းရေးအိပ်မက်များ [Click]
* မြူခိုးကြားကသူပုန့်ရေဒီယို [Click]
* ဘဏ်ခြောက်ခုကိုနိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်ရေးအတွက်ဗဟိုဘဏ်သင်တန်းပေး [Click]
Posted by Andaman Hero at 7:46 PM0comments
စက်တင်ဘာလ ၂၀ ရက်နေ့သတင်းများ
* ဧရာဝတီအရေးနဲ့ဒီမိုကရေစီစမ်းသပ်မှု [Click]
* သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အတွက်မြန်မာအစိုးရကိုCPJတိုက်တွန်း [Click]
* ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးဆက်လုပ်ဖို့ဘန်ကီမွန်းတိုက်တွန်း [Click]
* အောင်ဆန်းပင်လုံစာဖတ်ခန်းရန်ကုန်သဃ်န်းကျွန်းတွင်ဖွင့်လှစ်မည် [Click]
* NLDစာသင်ကျောင်းကလေးများကိုအနဂ္ဂ၊သံသာဝင်းတို့ကူညီလှူဒါန်း [Click]
* ရပ်ကျေးဥက္ကဋ္ဌများကိုအထက်မှရွေးချယ်သောစနစ်ဆက်လက်ကျင့်သုံးမည် [Click]
* ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘဏာနှစ်အတွက်ဘတ်ဂျက်လိုငွေကျပ်ဘီလီယံ၂,၃၀၀ကျော် [Click]
* မြစ်ဆုံဆည်စီမံကိန်းလွှတ်တော်နှင့်အစိုးရပေါ်မူတည်ဟုဝန်ကြီးပြော [Click]
* အစိုးရစစ်တပ်ကချင်ရွာသား၁၂ဦးကိုဖမ်းဆီး [Click]
* သူဌေးတွေအခွန်ပိုပေးရမယ်လို့အိုဘားမားပြော [Click]
* အလုပ်သမားတွေဆန်ဒပြခွင့်ရတော့မှာဖြစ်ပေမယ့်နိုင်ငံရေးအကြောင်းပြုမှုမဖြစ်စေရ [Click]
* မလေးရှားရောက်မြန်မာတဦးဓားထိုးခံရ [Click]
* ကုလအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ဖို့ပါလက်စတိုင်းလျှောက်မည် [Click]
* BBCအတွက်အလုပ်လုပ်ပေးတယ်ဆိုပြီးအီရန်မှာသတင်းသမားတွေဖမ်းထား [Click]
* ဂရိကနေအီတလီဆင့်ပွားပြဿနာကနယေူရိုငှကွေေးကပြွီ [Click]
Posted by Andaman Hero at 6:16 PM0comments
စက်တင်ဘာလ ၁၉ ရက်နေ့သတင်းများ
* သမတဟောင်းကလင်တန်ရဲ့ညီလာခံမှာဒေါ်စုတိုက်ရိုက်စကားပြောမည် [Click]
* ဆန်ဒပြမယ့်သတင်းကြောင့်ရန်ကုန်ရှိတရုတ်သံရုံးလုံခြုံရေးတင်းကျပ် [Click]
* ငွေလဲကောင်တာတွေဖွင့်တော့မယ် [Click]
* ကားသစ်ပါမစ်ရဖို့ကားဟောင်းတွေတန်းစီ [Click]
* သာမန်ပြည်သူအကဉ်းသားလှူ [Click]
* အပြောင်းအလဲတွေဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဒေါစုထပ်ပြော [Click]
* ထိုင်း၊မြန်မာနယ်စပ်ဂိတ်ပြန်ဖွင့်နိုင်မယ့်အလားအလာမရှိသေး [Click]
* အီဂျစ်နိုင်ငံရွေးကောက်ပွဲနိုဝင်ဘာကျင်းပမည် [Click]
* အားပြင်းငလျင်ကြောင့်အိန္ဒိယ၊တရုတ်နဲ့နီပေါလူ၅၀ကျော်သေဆုံး [Click]
* ထိုင်ဝမ်တိုက်လေယာဉ်တွေအမေရိကန်မွမ်းမံပေးမယ့်အစီအစဉ်တရုတ်သတိပေး [Click]
Posted by Andaman Hero at 11:51 PM0comments
စက်တင်ဘာလ ၁၈ ရက်နေ့သတင်းများ
* မြန်မာနိုင်ငံမှာအင်တာနက်ပိုလွတ်လပ်လာ [Click]
* မြစ်ဆုံဆည်ဆွေးနွေးပွဲ [Click]
* မြစ်ဆုံရေကာတာကိစ္စလွှတ်တော်တင်မည် [Click]
* ဧရာဝတီရဲ့အတိတ်လှိုင်း [Click]
* မြန်မာပြည်မှာအိမ်ခြံမြေကားရောင်းဝယ်ငှားလိုသူများအတွက် [Click]
* သခင်အုန်းမြင့်ကွယ်လွန်ခြင်းတနှစ်ပြည့်အခမ်းအနား [Click]
* လူငယ်လေးတဦးရဲ့သီချင်း [Click]
* မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာစစ်တပ်လွှမ်းမိုးထားဆဲလား [Click]
* ကုသိုလ်သည်ဘယ်မှာလဲ [Click]
* စစ်သွေးကြွှတွေနဲ့ပါကစ်စတန်အစိုးရဆက်စပ်နေ [Click]
* ဂီလာနီကရေဘေးအတွက်ဆကျကူမယ်လို့ဆို [Click]
* သက်ဆင်ရှင်နာဝပ်ကမ်ဘောဒီးယားရေက်ရှိ [Click]
* အမေရိကန်စစ်လေယာဉ်ထိုင်ဝမ်ကိုရောင်းချတော့မည်မဟုတ် [Click]
Posted by Andaman Hero at 4:39 PM0comments
စက်တင်ဘာလ ၁၇ ရက်နေ့သတင်းများ
* သမတအကြံပေး၊ဦးမြင့်ဝေမျှတဲ့၊ကချင်ခေါင်းဆောင်ရဲ့မြစ်ဆုံစီမံကိန်းပေါ်အမြင် [Click]
* ဦးရွှေမန်းနှင့်ခရိုနီများကိုယ်ရေးသံရုံးမှမှတ်တမ်းတင် [Click]
* ဝန်ကြီးဦးဇော်မင်းရှင်းလင်းပွဲအမတ်အချို့သာဖိတ်ကြား [Click]
* ငြိမ်းချမ်းရေးသဘောတူညီချက်များကိုUWSAရှင်းလင်း [Click]
* မြန်မာ့အရေးဥရောပမှာဆွေးနွေး [Click]
* အစိုးရတပ်ဖွဲ့တွေက၊နမ့်ဆန်ယန်ရွာကိုမီးရှို့ [Click]
လောလောဆယ်ပါတီဋ္ဌာနချုပ်မှချပေးထားသောချေးငွေများကိုမိမိတို့ကိုယ်ကျိုးအဖြစ်မြို့နယ် အတွင်းရေးမှုးနှင့်စီအီးစီအဖွဲ့မှအသုံးပြုနေကြပါသည်။ဗဟိုမှချပေးထားသောချေးငွေများကို ပထမတပါတ်လည်စဉ်အချိန်ထိသာပြည်သူလူထုကိုချေးပေးခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းတွင်ပြင်ပတွင်သာ 10တိုး15ကျပ်တိုများဖြင့်ချေးငှားနေပါသည်။ဗဟိုမှချပေးထားသောချေးငွေပေးရမည့်ပုံစံမှာ
ကျပ်နှုန်းဖြင့်ကောက်ခံပြီးတမြို့နယ်လုံအတွက်အဆိုပါကောက်ခံရရှိငွေမှာသိန်း(20 )မှ(28 )သိန်းကြားတွင်
အသက်60ကျော်နေပြီဖြစ်သောပုဂ္ဂုလ်များကို အခကြေးငွေယူပြီးရပ်ကွက် အုပ်ချုပ်ရေးမှုးနေရာများတွင်ခန့်အပ်ခဲ့ပါသည်။
* ကလေးစစ်သားကိုတပ်ပြေးအဖြစ်ဖမ်းထား [Click]
* လစ်ဗျားကို၊ဒါဏ်ခပ်ပိတ်ဆို့မှု့ကုလရုပ်သိမ်း [Click]
* ပါလက်စတိုင်း၊ကုလဝင်ခွင့်ရရေးလျှောက်မည် [Click]
* မြန်မာကုလကော်မရှင်UKတိုက်ခံတိုက်တွန်း [Click]
* လစ်ဗျားသူပုန်တွေဘန်နီဝါလိမြို့ကိုဝင်ပြီ [Click]
Posted by Andaman Hero at 7:51 PM0comments
စက်တင်ဘာလ ၁၆ ရက်နေ့သတင်းများ
* ဆီးရီးယားမှာအတိုက်အခံ၊ကိုယ်စားပြုအမျိုးသားကေင်စီဖွဲပြီ [Click]
* ကမဘာ့ဘဏ်ကြီးတွေရဲ့ဆေင်ရွက်ချက်၊ဈေးကွက်ကအပြုသဘောတုံ့ပြန် [Click]
* နယ်စပ်တင်းမာမှုနောက်ပိုင်းမူးယစ်ဆေးပိုထုတ်လာ [Click]
* ဗြိတိန်ဝန်ကြီးချုပ်နဲ့ပြင်သစ်သမတကိုလစ်ဗျားက၊သူရဲကောင်းသဖွယ်ကြို [Click]
* ခေတ်မှီပြီးလက်တွေ့ကြတဲ့၊ဒီမိုကရစေီဖြစ်အောင်မလေးရှားဖေါဆောင်မယ် [Click]
* ပိတ်ထားတဲ့ဝက်ဘ်ဆိုဒ်များပြန်ပွင့် [Click]
* မူးယစ်ဆေးဝါးတိုက်ဖျက်ရေးမြန်မာတာဝန်မကျေ [Click]
* မြန်မာပြည်အပြောင်းအလဲအမေရိကန်နဲ့သြစတြေးလျမျှော်လင့် [Click]
* မြန်မာပြည်အရေးစိုးရိမ်စရာများရှိသေးဟုဟီလာရီကလင်တန်ပြော [Click]
* ကျန်းမာရေးချို့ယွင်းသူကိုလွှတ်ရန်AAPPတောင်းဆို [Click]
* ကားအစားထိုးလဲခွင့်ကြောင့်ဒေါ်လာဈေးထိုးတက် [Click]
* ဒီမိုကရေစီဘက်တော်သားပါဟုဦးရွှေမန်းပြော [Click]
* သျှမ်းသံတော်ဆင့်အယ်ဒီတာဦးစိန်ကြည်ကွယ်လွန် [Click]
* အိန်ဒိယသို့မျောပါသွားသောရေလုပ်သားများကိုပြန်ခေါ်ယူစီစဉ် [Click]
* ရေအားလျှပ်စစ်ညွှန်မှူးရွာမီးမလင်းပါ [Click]
* နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများလွတ်မြောက်တော့မည်ဟုမိသားစုများအကြားသတင်းထွက် [Click]
* ရွာခရိုးကရွှေချိုးကူသံ [Click]
* သျှမ်းသံတော်ဆင့်လက်ထောက်အယ်ဒီတာ/တေရေးဆရာ/အဆိုတော်၊ဆခဟကွယ်လွန် [Click]
* မိုင်းခွဲခံနေရသဖြင့်၊ရခိုင်သဘာဝသန္တာကျောက်တန်းများပျက်စီးနေ [Click]
* ကျောက်ဖြူမြို့နယ်တွင်အပေါ်ယံမြေကြောမှရေနံထွက်၍လူအများအပြားသွားရောက်တူးယူနေ [Click]
* ကေအန်ယူအဖွဲ့ဝင်နှစ်ဦး၊မူးယစ်ဆေးများဖြင့်ဖမ်းမိကြောင်းထိုင်းသတင်းကိုငြင်းဆို [Click]
* ပျောက်နေသည့်မန်းငြိမ်းမောင်အတွက်မိသားစုစိုးရိမ် [Click]
Posted by Andaman Hero at 5:20 PM0comments
စက်တင်ဘာလ ၁၅ ရက်နေ့သတင်းများ
* အပြောင်းအလဲဖြစ်နိုင်ဟုဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပြော [Click]
* ပုသိမ်လယ်သမားများဝန်ကြီးရုံးသို့ချီတက် [Click]
* ပိတ်ဆို့မှုရုပ်သိမ်းရန်ဦးရွှေမန်းတောင်းဆို [Click]
* သျှမ်းသံတော်ဆင့်အယ်ဒီတာကွယ်လွန် [Click]
* ထိုင်းစစ်ဗိုလ်ချုပ်နေပြည်တော်သွား [Click]
* နိုင်ငံပြောင်းလဲမည့်အခြေအနေရောက်နေပြီဟုဒေါ်စုပြော [Click]
* ရေလုပ်သားများအသက်အာမခံထားခွင့်ရတော့မည် [Click]
* ဒေါ်စုအိုင်ဒီယာဟောင်းတွေပဲစွဲနေဟုဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေတိုင် [Click]
* ဧရာဝတီကိုမလွမ်းချင်ပါဆောင်းပါးများနှင့်ရသစာစုများစာအုပ်ထုတ်ဝေ [Click]
* သခင်အုန်းမြင့်ကွယ်လွန်းခြင်း(၁)နှစ်ပြည့်ကျင်းပမည် [Click]
* လွတ်မြောက်တဲ့အနုပညာပန်းချီထိန်လင်းနဲ့စကားလက်ဆုံ [Click]
Posted by Andaman Hero at 6:29 PM0comments
* သူပုန်ကျောင်းသားတဦးရဲ့မာရသွန်ခရီး၁ [Click]
* သူပုန်ကျောင်းသားတဦးရဲ့မာရသွန်ခရီး၂ [Click]
* သူပုန်ကျောင်းသားတဦးရဲ့မာရသွန်ခရီး၃ [Click]
* ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဘောလုံးပွဲသွားကြည့် [Click]
* တိုင်းရင်းသားဒေသအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုများစုံစမ်းဖော်ထုတ်ရန်အမေရိကန်ကမြန်မာကိုတိုက်တွန်း [Click]
* စည်သူဇေယျကိုထောင်ဒဏ်၁၀နှစ်ထပ်တိုး [Click]
* ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများမြန်မာအစိုးရအခိုင်အမာသက်သေပြသင့် [Click]
* အမရေိကန်အထူးကိုယ်စားလှယ်ခရီးကိုသုံးသပ် [Click]
* အစိုးရရဲ့လုပ်ဆောင်မှုတွေကိုအမေရိကန်သသံသယရှိ [Click]
* အမရေိကန်ကိုယ်စားလှယ်လူ့အခွင့်ရေးကော်မရှင်နဲ့တွေ့ [Click]
* သက်ြန်ဗုံးကွဲမှုဓါတ်ပုံရိုက်သူကိုထောင်ဒါဏ်၁၀တိုး [Click]
* ဥရောပကျွေးမြီအကြပ်အတည်းဖြေရှင်းရေးအရေးကြီး [Click]
* အမေရိကန်မှာဆင်းရဲမှုမြင့်တက် [Click]
* တောင်ငူရေကြီးရပ်ကွက်တချို့ရေမြုတ် [Click]
* စစ်မှန်တဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေစနေပြီလို့ဒေါ်စုအချက်ပြ [Click]
* ဒဲရက်မစ်ချဲလ်တိုင်းရင်းသားပါတီတွေနဲ့တွေ့ [Click]
* ၂၀၀၃ဒါဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုသက်တမ်းတိုးဖို့အထက်လွှတ်တော်ဆုံးဖြတ် [Click]
* သမတအကြံပေးနဲ့ဗွီအိုအေမြန်မာသီးခြားတွေ့ဆုံမေးမြန်းချက် [Click]
* ဒီမိုကရေစီရေးလူငယ်လှုပ်ရှားမှုတွေကိုပိုမိုထောက်ခံအားပေးဖို့ဘန်ကီမွန်းတိုက်တွန်း [Click]
* ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုလက်တွေ့ပြဖို့အမေရိကန်သံတောင်းဆို [Click]
* ရေးဝံ့သူများအတွက်လူ့အခွင့်အရေးဆု [Click]
* ဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်အဆိုးဝါးဆုံးချိုးဖောက်တဲ့၈နိုင်ငံထဲမှာမြန်မာပါဝင် [Click]
Posted by Andaman Hero at 6:45 PM0comments
၎င်းငွေအားယူသူသည်ထောင်ဝင်စာလာလျှင်၎င်းတန်းစီးကထောင်ဝင်စာလာသူ၏အိမ်မှအတင်းအဓမ္မမရ မကတောင်းယူပါသည်။၎င်းလောင်းကစားဝိုင်းကြေးကဂဏန်း၂လုံးရှိသည်။(ဖဲဝိုင်း၊ကြွေဝိုင်း၊အံဂလုံဝိုင်းများ) ရှိ။အာဏာပိုင်များသိသော်လည်းဘာမျှမလုပ်။မလုပ်ရခြင်းကဆတ်ကြေးပေးထား၍ဖြစ်ပါသည်။ထို့အပြင် ထိုတန်းစီးသည်အမျိုးသမီးဆောင်သို့ညဖက်မှလွဲ၍မည်သည့်အချိန်မဆိုဝင်ထွက်ခွင့်ရစေရန်ထောင်ပိုင်ဖြစ် သူဦးအေးကိုကိုအား၁၇သိန်းပေး၍၀င်ထွက်လျှက်ရှိပါသည်။၎င်းမွေးထားသောအချုပ်သားများအားရုံးပြန် လာလျှင်(တရာရုံး)မူယစ်ဆေးဝါး(မြင်းဆေး-စ်ိတ်ကြွဆေးရာမ)သွင်းပြီးပြန်ရောင်းသည်။၁လုံးပေါက်ဈေး ၇၀၀၀ကျပ်ရှိပါသည်။ထို့အပြင်အချုပ်သားများအားရုံးထုတ်သောနေ့များ၌မိမိလိုအပ်သောပစ္စည်းများထောင် အတွက်လိုအပ်သောပစ္စည်းများကိုဝယ်လာခိုင်းပါသည်။ရုံးထွက်သူအချုပ်သားများကျေနပ်သည်ဖြစ်စေ မကျေနပ်သည်ဖြစ်စေကြောက်၍၀ယ်လာပေးရသည်။နိုင်ငံ၏ဉပဒေတွင်၎င်း၊အကျဉ်းထောင်လက်စွဲစာအုပ် တွင်အချုပ်သားများအားအလုပ်လုပ်မခိုင်းစေရန်ရှိပါသော်လည်း၊
ကိုအလုပ်မလုပ်ကိုင်စေရန်အတွက်၅၀၀၀၀ကျပ်နှင့်၁၀၀၀၀၀ကြားကောက်ခံပါသည်။ ထို့အပြင်ရဲဘက်စခန်းသို့မထွက်ချင်လျှင်၃သိန်းမှ၅သိန်းထအိပေးရပါသည်။၎င်းရရှိသောငွေများကိုထောင် ပိုင်သို့တစ်ဉီးလျှင်၂၅၀၀၀(သို့)၃၀၀၀၀ခန့်ပေးရပါသည်။နောက်ထောင်လက်အောက်ရှိစခန်းများကို ရဲဘက်ထုတ်လျှင်အကျဉ်းသားများထံမှပေးပို့နိုင်သူများထံမှဓါတ်မြေသြဇာ၂အိတ်မှ၁၀အိတ်အထိပေးရပါ သည်။နဲနဲပေးနိုင်သူများကအနဲဆုံး၂အိတ်ပေးရပါသည်။အိတ်ဆောင်များတွင်ဖဲဝိုင်းများနေစဉ်ပြုလုပ်ခြင်း၊ အရက်များသွင်း၍တန်းစီးစည်းကမ်းထိန်းများကအဆီတစ်လုံး၁၂၀၀၀ကျပ်ပေးရပါသည်။
၀င်းတန်းစီးဖြစ်သူဘောကြီး(ခ)မြင့်စိုး(နှစ်အကန့်အသတ်မရှိ၊ဆေးမှုး)သည်ထောင်၏အဓိကကျသောအ ပိုင်းမှာရှိသည်။ထောင်ပိုင်အတွက်ငွေရှာပေးခြင်းအကျဉ်းသားများအားအတင်းအဓမ္မငွေတောင်းခံခြင်းများ ကိုပြုလုပ်ပေးနေသောအဓိကလူဖြစ်ပါသည်။ထို့အပြင်(မိလ္လာများဆောက်လုပ်ခြင်း၊ဓမ္မာရုံဆောက်လုပ်ခြင်း၊ လမ်းများခင်းခြင်း)များတွင်အကျဉ်းသားများထံမှလိုအပ်သောအုတ်၊ဘိလပ်မြေ၊သဲများကောက်ခံ၍တည်
ဆောက်ပေးပါသည်။ထို့အပြင်အကျဉ်းသားများအားဖိနှိပ်၍တာဝန်ခံဝန်ထမ်းများအားမျက်နှာလုပ်ပြီးအ သက်ဆက်လျှက်ရှိပါသည်။၀င်းတန်းစီးမြင့်စိုးသည်တစ်ပတ်ထောင်ဝင်စာတစ်ခါတွေ့လျှင်အိမ်ရှိမိသားစုထံ သို့၅သောင်းထောက်ပံ့ပေးလျှက်ရှိသည်။ထို့အတူအချုပ်တန်းစီးခင်စိန်သည်လည်း၃လတစ်ကြိမ်ထောင်ဝင် စာတွင်အိမ်သို့၁၅သိန်းခန့်ပြန်လည်ထောက်ပံ့လျှက်ရှိသည်ထောင်ပိုင်ဖြစ်သူကထောင်ပြုပြင်ရန်ပေးသော ဌာနဆိုင်ရာဘတ်ဂျက်အား၎င်း၏အိတ်ထဲသို့ထည့်၍တန်းစီးဆိုသူများကိုအကျဉ်းသားများထံမှအတင်းအဓမ္မ အလှူခံပြီးပြုပြင်စရာရှိတာများကိုပြုပြင်ပါသည်။ကောက်ခံငွေမရှိ သေးပါလျှင်လုပ်လက်စအလုပ်များရပ်သွား
ဆောက်မှုဘတ်ဂျက်များတွင်လည်းထိုငွေများကိုရယူရုံသာမကအကျဉ်းထောင်သို့တရားဝင်လှူဒါန်းမှုများ ကိုပါ၎င်းကယူဆောင်လျှက်ရှိပါသည်။(ဉပမာ-၂၀၀၉ခုနှစ်၂လပိုင်းတွင်ရဲမှူးကြီးဦီးရွှေအေး(မော်လမြိုင်ခရိုင် ရဲတပ်ဖွဲ့မှ)အင်ဗာတာ၎လုံး၊ဘက်ထရီ၎လုံးနှင့်ငွေကျပ်၅သိန်းအားအကျဉ်းသားများအတွက်လှူဒါန်းပေးသော်
နောက်ဉပမာတစ်ခုက၂၀၁၀ဧပြီလတွင်ထောင်ပိုင်ဦးအေးကိုကိုရဲ့ရှင်ပြုအလှူလုပ်ပါသည်။ ၀န်ထမ်းသားသမီးများအချို့နှင့်၎င်း၏သားသမီးများလည်းပါသည်။ရှင်ပြုမည့်ဝန်ထမ်းများထံမှအလှူငွေ ထည့်ခိုင်းခြင်း၊အကျဉ်းသားများအားအလှူဆိုပြီးသီးစုံဟင်းနှင့်ငပိကျော်ကျွေးပါသည်။ကျွေးသည့်နေ့က တနဂ်နွေနေ့ဖြစ်ပါသည်။တနင်္ဂနွေနေ့တွင်ထောင်တွင်း၌နိုင်ငံတော်အသားစားကျွေးရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းထောင်ပိုင်ကနိုင်ငံတော်အသားစားမကျွေးဘဲ၎င်းကျွေးရမည့်အသားစားတန်ဖိုးငွေအား၎င်း၏အိတ် ကပ်ထဲသို့ထည့်လိုက်ပါသည်။အကျဉ်းသားများအားအနိုင်ကျင့်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ထိုရက်တွင် ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဦးဇော်ဝင်းရောက်ရှိနေစဉ်ဖြစ်ပြီးညွှန်ချုပ်ကြီးမှာ၂၀၀၀၀၀ကျပ်လှူသွားသည် ဟုသိရပါသည်။နောက်တစ်ခုကအကျဉ်းသားကျော်ဉီး(ခိုးမှု)ဆိုသူကိုထောင်တွင်းရေစက်ကိုင၊် မီးပြင်နေသူအလုပ်ချထားပါသည်။၎င်းသည်ထောင်ပိုင်အားယုံကြည်မှုရယူထားသူဖြစ်သည်။ တစ်နေ့ညွှန်မှူးရုံးမီးပြင်ရန်ဆိုပြီးထောင်ဗူးဝမှဝန်ထမ်းတဦးနှင့်ညွှန်မှူးရုံးသို့ထွက်သွားပြီးပြန်
Posted by Andaman Hero at 5:39 PM0comments
ဥပမာအားဖြင့်ယခုကျွန်တော်တို့မဲပေးခဲ့သည့်မြူနီစပါယ်ရွေးကောက်ပွဲကို၂၀၁၅ တွင် ထပ်မံကျင်းပမည်ဖြစ်ပြီး၊ပြည်သူ့လွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲမှာ၂၀၁၃တွင်တစ်ကြိမ် ၊
Posted by Andaman Hero at 12:17 PM0comments
အလုပ်သမားသွေးစည်းညီညွတ်ရေးအဖွဲ့(labour soldierity aka LS)ဆိုတာ၊အရင်
ဦးမောင်ကိုဆိုတာအင်းလျားရိပ်သာလမ်းထဲက၊သူဌေး။၁၉၈၈အရေးအခင်းမဖြစ်ခင်ကမြန်မာဆိပ်ကမ်း အာဏာပိုင်ဌာနကမန်နေဂျာ။မနေနိုင်မထိုင်နိုင်၊အရေးအခင်းမှာဝင်ပါပြီးတော့၊အင်အယ်ဒီဗဟိုအလုပ် သမားအဖွဲ့ရဲ့ကော်မီတီဝင်တောင်လုပ်လိုက်သေးတယ်။
နအဖကဖမ်းပြီးတော့၊စစ်ကြောရေးမှာနှိပ်စက်သမျှကိုကုန်းခံ။သုံးရက်မီးလွတ်စားပြီး၊ကိုယ့်ကိုကိုယ် သတ်သေသွားတဲ့သူ။သေတဲ့အထိ၊ထောက်လှမ်းရေးကိုသူ့ရဲဘော်တယောက်ရဲ့နာမည်မှမပေးခဲ့တဲ့ သူ။သူ့နေရာကိုဆက်ခံပြီးလှုပ်ရှားခဲ့တာမြင့်စိုးတဲ့။အတွင်းရေမှုးလုပ်ခဲ့တာ၊အာကာဟိန်း
ဟောင်းဇော်ညွန့်။နောက်ဇီးကွက်ခေါ်ထွန်းထွန်းနိုင်။ခုအသည်းရောဂါနဲ့။ကုစရာနတ္တိ။သူတို့လွတ်လာတော့၊ သူတို့ရဲဘော်၊လူသစ်က၊သေတော့မယ်။လူသစ်သေတဲ့အချိန်မှာကိုဇော်ညွန့်အမေကပေါင်ကျိုး။ဒါဆို အယ်အက်စဟာဘယ်လိုအဖွဲ့ဆိုတာသိလောက်ပါပြီနော်။
ဒါအယ်အက်စ်တစ်ဖွဲ့ထဲကိုဘဲ၊ဥပမာပေးသေးတာနော်။မင်္ဂလာမရှိတဲ့အရပ်မှာရောက်နေရရှာသောမင်္ဂလာရှိ သူတွေအကြောင်းသာတခမ်းတနားပြောကြပါစို့ကွာ။ကိုယ့်စကားကိုယ်ဘယ်ရောက်မှန်းမသိသူတွေနိုင်ငံရေးမှာ မရှိတော့ရင်၊တတိုင်းပြည်လုံးအတွက်အဟောသုခံ။ခုငါငိုနေတယ်သူငယ်ချင်း။ သူတို့အတွက်၊ရင်းစားယူဘို့နာကျဉ်းချက်တွေကိုသွေးတဲ့မျက်ရည်။
Posted by Andaman Hero at 11:46 AM0comments
အစိုးရကပလီပလာလုပ်တယ်မလုပ်ဖူးဆိုတာသိဖို့မြန်မာပြည်ကသတင်းထောက်တွေ စာနယ်ဇင်းဆရာတွေပေါ်မှာလုံးဝအားကိုးရမှာဘဲနိုင်ငံရေးလေ့လာသူတွေကိုယုံကြည်ဖို့ ကတော့ဘယ်နိုင်ငံဘယ်စနစ်မှာမှာမရှိပါဘူး။
Posted by Andaman Hero at 7:38 PM0comments
အစိုးရသစ်နှင့် ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်မှုများတွင် အစိုးရ ဘက်မှ ပလီပလာ၊
ဟန်ပြနှင့် မရိုးသားမှုများ ပါလာပါက မိမိအနေဖြင့် တာဝန်ယူသွားမည်
ဖြစ်ကြောင်း စက်တင်ဘာလ ၈ရက်နေ့က အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရုံးတွင်
ရန်ကုန်ခရော်နီကယ်၏ မေးမြန်းချက်အား ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြန်လည်
“အန်တီ မှားခဲ့ရင်၊ ကျရှုံးခဲ့ရင် အန်တီတာဝန်ယူမယ်” ဟု
လက်ရှိ တိုင်းပြည်အခြေအနေမှာ ပြဿနာများရှိနေ၍ ဝင်ရောက်ကူညီရမည်
ဖြစ်ကြောင်း၊ ယင်းသို့ ဝင်ကူရာ၌လည်း တက်နိုင်သလောက်
ကူညီပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ဆက်လက်ပြောကြားသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် နိုင်ငံတော်သမ္မတနှင့် နေပြည်တော်တွင်
ပထမအကြိမ်တွေဆုံရာ၌ NLDပါတီ တရားဝင် ရပ်တည်ရေး၊ နိုင်ငံရေး
အကျဉ်းသားများပြန်လွတ်လာပါက ဆူပူမှုများ မဖြစ်ပေါ်စေရန်နှင့်
တိုင်းရင်းသားများနှင့်ဖြစ်ပွားနေသည့် ပဋိပက္ခများကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်း
NLD ပါတီ၏ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဦးဥာဏ်ဝင်းက ပြောကြားသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် အစိုးရသစ်ခေါင်းဆောင်များ တွေ့ဆုံကြပြီးနောက်
သိသာထင်ရှားသည့် ပြောင်းလဲတိုးတက်မှုများ ဖြစ်ပေါ်မလာသေးသဖြင့်
သုံးသပ်နေကြချိန်တွင် အထက်ပါအတိုင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏တုံ့ပြန်ချက်
“တကယ်ပဲ အသုံးချခံရတယ် ဆိုရင်တောင်မှ တိုင်းပြည်အတွက်
အသုံးချခံရတယ်ဆိုရင် မနှစ်မြို့စရာအကြောင်း မရှိပါဘူး။ ယုံကြည်ချက်အတွက်
ဆက်လုပ်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်” ဟု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ဆိုသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်တို့ တွေ့ဆုံမှုနှင့်ပတ်သက်၍
နိုင်ငံပိုင် သတင်းစာများက ထုတ်ပြန်ရာတွင် မတူကွဲလွဲချက်များကို
ရှောင်ရှားပြီး တူညီချက်များကို တိုင်းပြည်၏ အကျိုးစီးပွားအတွက်
လက်တွဲလုပ်ဆောင်သွားမည်ဟု ဖော်ပြထားသည်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကလည်း
တွေ့ဆုံမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ကျေနပ်အားရမှုရှိကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
လက်ရှိအစိုးရသစ်က ၂၀၁၄ ခုနှစ် အာဆီယံခေါ်
နိုင်ငံတကာ ဖိအား လျော့နည်းစေရန် ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် တွေ့ဆုံပြခြင်း ဖြစ်နိုင်သည်ဟု နိုင်ငံရေး
လေ့လာသူတချို့က သုံးသပ်ပြောဆို ကြသည်။
( yangonchronicle သတင်းလွှာ “အစိုးရသစ်နှင့် ပူးပေါင်းမှုတွင်
ကျရှုံးပါက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မှ တာဝန်ယူမည်” မှ ကူးယူဖော်ပြပါသည် )
Posted by Andaman Hero at 6:40 PM0comments
ရန်ကုန်-ပြည် ကားလမ်းမပေါ်က ကြို့ပင်ကောက်ဆိုတဲ့မြို့ကလေးကို ဖြတ်သွားမိရင် သူများတွေ ဘာတွေတွေးမိသလဲတော့ မသိဘူး။ ကိုယ့်ဘာသာတော့ ငယ်ငယ်တုန်းက အင်မတန် နံမယ်ကြီးတဲ့ လေချွန်နတ်ဆိုတာကို သွားသတိရပါတယ်။ သူက ရှေ့ဖြစ် နောက်ဖြစ် ဗေဒင်ယတြာတွေ ဟောတာမဟုတ်ဘူးဗျ။ ကွယ်လွန်သွားတဲ့လူတွေ တမလွန်မှာ ကျွတ်ကျွတ်လွတ်လွတ် ဖြစ်မဖြစ်၊ ဘယ်လိုဘ၀မျိုး ကူးပြောင်းသွားတယ် လို့ ဟောနိုင်ပြီး မကျွတ်မလွတ်သေးလို့ရှိရင် အလွမ်းပြေ ချတ်တင်ဝင်လို့ရသတဲ့။ စစ်ကိုင်းပြည်တို့ ရွာဦးမစိန်ကြာတို့လို အရုပ်မမြင်ရပေမယ့် ဂျီးတော်နဲ့ ချက်သလို အသံကလေးတော့ ကြားနိုင်သတဲ့။ သို့သော်ငြားလည်း မြန်မာပြည်ကွန်နက်ရှင်နဲ့ဆိုတော့ သိတဲ့အတိုင်းပဲလေ။ တရွှီရွှီနဲ့ လေချွန်သံတွေချည့်ပဲ ကြားနေရတာနဲ့ နတ်ကတော်လုပ်တဲ့ ဘွားတော်ကြီးက အင်တာပရက်တာ လုပ်ပေးရပါသတဲ့။ သူ့ခေတ်နဲ့သူ့အခါတုန်းကတော့ အင်မတန်မှန်တယ်တဲ့ဗျား။ ရွှေမန်းတင်မောင် ဘယ်ဘ၀ရောက်နေတယ်တို့ ဘာတို့တောင် အတိအလင်း ဟောနိုင်တယ်လို့ ပြောကြတာပေါ့။ ဗမာပီပိ ဗေဒင်မေး နတ်မေး၊ အတင်းတုပ်၊ အိမ်လည်ဆိုတာ ဘယ်သူမှ မနေနိုင်တဲ့ အမျိုးဆိုတော့ အပျင်းပြေ သွားမေးကြည့်ရင် မကောင်းဘူးလား။ လာ .. လိုက်ခဲ့။
ကျွနင်္ုပ် ။ အမေကြီး။ နေကောင်းလား။ အရင်လို ဟောနိုင်ပြောနိုင်တုန်းပဲလား။
လေချွန်နတ် ။ ကောင်းပ မောင်ရာ။ အရင်လောက်တော့ ဘယ်ဟောရတော့မလဲ။ ခေတ်ကာလသားသမီးတွေက သေသောသူ မကြာခင်မေ့ကုန်ကြလို့ အမေးအမြန်းသိပ်မထူတော့ဘူး။ သေတဲ့သူတွေကလည်း ရှေးကလို မြေကြီးထဲ ရွှေတွေမြှုပ်ပစ်ခဲ့တာမှ မရှိတော့တာ။
ကျွနင်္ုပ် ။ အမေကြီးက သေပြီးသားလူဆို ဘယ်လောက်ကြာကြာ ပြန်ခေါ်မေးးလို့ရတာပဲလားဗျ။
လေချွန်နတ် ။ ဘ၀မကူးသေးရင်တော့ ရတာပကွယ်။ မင်းတို့ ခုနှစ်ရက်သားသမီးတွေတောင် အနော်ရထာလက်ထက်က ဖျဉ်းဘရားသား ခေါ်ခေါ်ပြီး ပါတီပေးပေးနေကြတဲ့ဥစ္စာ။ နတ်နဲ့နဂါး မလှည့်စားနဲ့တဲ့။ ဘာလဲ။ ပညာစမ်းချင်လို့လား။ ငါ .. တယ် …။
ကျွနင်္ုပ် ။ ယုံပါပြီ အမေရယ်။ ယုံပါပြီ။ ခုခေတ်နတ်ကတော်တွေက ကွမ်ရင်မယ်တော်ကြီးတောင် ရအောင်ပင့်နိုင်တာ တွေ့ပါတယ်။ ဒါထက် စကားမစပ်ဗျာ။ သူတို့လို ဘာသာမတူတဲ့ လူမျိုးခြားနတ်တွေ ၀င်လာပြီး ပြောရင်လည်း အမေတို့က နားလည်တာပဲလား။
လေချွန်နတ် ။ တော်ပြောမှပဲ ကျုပ်တို့နတ်ကတော်တွေ ယူအက်ဖ်အယ်လ်ပြေးပြီး စပီကင်တက်ထားရမယ့်ပုံ။ နတ်တို့၏ ဘာသာစကားဆိုတာ မနောကပြောတာကွဲ့။ ထရန်စလိတ်တာ မလိုဘူး။ ချက်ဆို နားခွက်က မီးတောက်တယ်။ ဂွပ်ကနဲ့ဆို ဓါတ်ပြီးသား။ နပ်လွန်လွန်းလို့ နတ်ဖြစ်နေတာပေါ့ သားရယ်။
ကျွနင်္ုပ် ။ ပေါက်ပါပြီ အမေ။ ပေါက်ပါပြီ။ ပညာစမ်းတယ်တော့ မအောင့်မေ့ပါနဲ့။ မေးချင်သိချင်တဲ့စိတ်တွေ များလွန်းလို့ မစားနိုင်မအိပ်နိုင်ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ လူတစ်ယောက်ရှိပါတယ်။ သေတာတော့ နည်းနည်းကြာပါပေါ့။ အမေကြီးရဲ့ စက်တလိုက်ထဲမှာ ဘရောင့်ဇ်လုပ်ပေးပါဦး။ ရှိများရှိရင် မေးလိုက်ချင်ပါရဲ့။
လေချွန်နတ် ။ နံမယ်နဲ့ သေတဲ့ခုနှစ်ကို ပြောလေ။ ဒေတာ အန်းတားမလုပ်ပဲ ငါက ဘယ်လိုရှာရမှာတုန်း။ ဘယ်လိုသူငယ်ပါလိမ့်။ သတင်းစာထဲမှာ ယောက္ခမလွမ်းစာတွေ ထည့်ထည့်နေပုံထောက်ရင် ဘာတွေမေးချင်နေမှန်းမသိ။
ကျွနင်္ုပ် ။ ဟုတ်ပါဘူး အမေကြီးရယ်။ သေတဲ့ခုနှစ်ကလေး ပြန်စဉ်းစားနေလို့ပါ။ မှတ်မိပြီဗျ။ ခရစ်တော်မပေါ်ခင် ဘီစီ ၃၉၉ မှာ ကွယ်လွန်သွားတာ။ နံမယ်ကတော့ ဆော့ခရိတ္တိ လို့ခေါ်တယ်။ ကျွန်တော်တို့ ငယ်ငယ်တုန်းက ပါတီအတွေးအခေါ် စာအုပ်တွေထဲမတော့ အင်္ဂလိပ် စာလုံးပေါင်းအတိုင်း ဗမာလိုအသံထွက်ပြီး ဆိုကရေးတီး လို့ ခေါ်ကြတယ်။
လေချွန်နတ် ။ သောက်ကျိုးနည်း။ လက်စသတ်တော့ နင်က ငါ့ကို ပညာစမ်းနေတာပေါ့လေ။ ရွှီဘွားတော်ဟဲ့။ သေမှာမကြောက်လို့ ပေတရာလျှောက်နေတာ။ နင့်အကောင် နတ်ဖြစ်နေလို့ကတော့ ခေါ်ပြလိုက်မယ်။ မေးစမ်းတော်။ အမုန်း။ ပြီးရင် နင့်ကိုပါ သူနဲ့ ပြန်ထည့်ပေးလိုက်မယ်။
ကျွနင်္ုပ် ။ ဟော … လာပြီ လာပြီ ဒေါ်သက်ရီ။ ဘယ်ရပ်ဘယ်ရွာကလာတဲ့ ဘယ်သူဘယ်ဝါဆိုတာကလေး အင်ထရိုလုပ်တော်မူပါဦးဖျာ့။
ဆော့ခရတ္တိ ။ အောင်မယ်။ ခေါ်တုန်းကခေါ်ပြီး။ အခုမှ မသိချင်ယောင်ဆောင်နေတယ်။ နံမယ်က ဆော့ခရိတ္တိ၊ အိုလံပပ်စ်တောင်တော်။ ခေါမပြည်ကလာတာ ။
ကျွနင်္ုပ် ။ သိပါပြီ ဆရာကြီးရယ်။ လေးစားလွန်းလို့ ပင့်ရဖိတ်ရတာပါ။ အော်မီသော်ဖော်( အမိတဘ) စိတ်မရှိပါနဲ့။ ပညာရှိစကားများ တမလွန်က ကြားရရင်တောင် အမှောင်ခွင်း အလင်းဆောင်နိုင်တယ်ဆို လို့ပါ။ အမိုက်အမဲလေးတွေကို ဗွေမယူပါနဲ့။ ဆိုကျောင်းလောင် (ဆိုဆရာတော်)။
ဆော့ခရိတ္တိ ။ လေသံတွေ ကြားရတာကတော့ တရုတ်ပြည်ကြီးရဲ့ ပြည်နယ်တစ်ခုကမှတ်တယ်။
ကျွနင်္ုပ် ။ အညာကဆရော် လို့ နှုတ်ဆက်ရင် မြောက်ကိုရီးယားကလို့ မှတ်မှာလား အားပုဂျိရယ်။
ဆော့ခရိတ္တိ ။ အေးကွဲ့။ တောင်ကိုရီးယားစော်ကတော့ နည်းနည်းမှ မနံတာအမှန်။
ကျွနင်္ုပ် ။ လိုရင်းမရောက်ပဲ ချော်တောငေါ့သွားတော့မှာပဲ။ ဆရာကြီး ခင်ဗျား။ ဆရာကြီးကို အေသင်မြို့သူမြို့သားတွေက အဆိပ်ခွက် ကိုယ်တိုင်သောက်စေပြီး ကွပ်မျက်ခဲ့တယ်လို့ ကြားဖူးပါတယ်။ ဘာအမှုနဲ့များပါလိမ့်ခင်ဗျာ။
ဆော့ခရိတ္တိ ။ နတ်ဘုရားများကို ပူဇော်ပသခြင်းမပြုမှု၊ လူငယ်တွေကို ဘုရားတရားမကြည်ညိုအောင်၊ မိဘဆိုဆုံးမရခက်အောင် မြှောက်ထိုးပင့်ကော်လုပ်မှု၊ ကိုယ့်အလုပ်ကိုယ်မလုပ်ပဲ မိုးအောက်မြေပြင် ဟိုဟာမှန်တယ်။ ဒီဟာမှားတယ်နဲ့ လျှောက်တွေးနေပြီး အဲသလိုတွေးထားတာတွေကို သူများတကာ နားလည်လက်ခံလာအောင် ပလီစိချောက်ချက်တွေ ဟောပြောရေးသားမှုပါတဲ့ကွယ်။လိုရင်းကိုတစ်ခွန်း တည်း ပြောရရင် ယုံကြည်ချက်ကို မစွန့်လွှတ်နိုင်လို့ အသက်နဲ့လဲခဲ့တာပေါ့ကွ။
ကျွနင်္ုပ် ။ ကိုယ်နဲ့ယုံကြည်ချက်ချင်းမတူတာနဲ့ပဲ၊ ကိုယ့်သြဇာမတည်မြဲမှာ စိုးတာနဲ့ပဲ အပြစ်လို့ သတ်မှတ်ပြီး အဲဒီအပြစ်အတွက် သေဒဏ်စီရင်တယ်ဆိုတော့ အေသင်မြို့သူမြို့သားတွေဟာ တော်တော် ရက်စက်မိုက်မဲကြပုံ ရတယ်နော်။
ဆော့ခရိတ္တိ ။ အဲလို မပြောရဘူးကွ။ ဂျူရီလူကြီးပေါင်း ၅၀၀ က ဆုံးဖြတ်တာ။ အများစုက ဥပဒေနားမလည်တဲ့ အပျော်တမ်းဝါသနာရှင်တွေ၊ လူအိုလူမင်းနဲ့ ဒုက္ခိတတွေလည်းပါတယ်။ အိမ်မှာနေရတာပျင်းလို့ တနေ့ သုံးအိုဘို ရလည်း မနည်းဘူးဆို လာထိုင်နေတဲ့သူတွေလည်း ပါတယ်။ ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ် အေသင်နိုင်ငံသားစစ်စစ်တွေက စီရင်လိုက်တာဆိုတော့ ခံသာတာပေါ့ကွာ။ မင်းလည်း သိပ်အာချောင်မနေနဲ့။ အေသင်သားတွေ မင်းတို့ဆီ ၀င်စားတာ ဘယ်နှစ်ယောက်ရှိမှန်းမသိဘူး။
ကျွနင်္ုပ် ။ ဟုတ်မယ်။ ဟုတ်မယ်။ ကျွန်တော်တောင် တစ်ယောက်သိသေးတယ်ဗျ။ သူ့နံမယ်က အေသင်ချိုဆွေတဲ့။ ကလေးမလေးက ချစ်စရာလေးပါ။ ဒေါသတော့ ကြီးမယ့်ပုံနော်။ ဒီမှာ တင်းတယ် တင်းတယ်။ တင်းတယ် တင်းတယ် ဟေ့ …. ဆိုလား။
ဆော့ခရိတ္တိ ။ ၀ါသနာတွေက တားလို့ကို မရဘူး. ပေါ်ပေါ်လာပြီ။ မင့်မှာ ငါ့လို အမှန်တရားအတွက် ယုံကြည်ချက်အတွက် အသက်စွန့်ဝံ့တဲ့သတ္တိလည်း မရှိပဲနဲ့။ မရဲပဲ ကျွဲပြဲ မစီးချင်ပါနဲ့ကွယ်။ မင့်လောက်ကတော့ သေဒဏ်တောင် ပေးစရာမလိုဘူး။ ထောင်ရောက်တန်းရောက်နဲ့တင် ဇီဝိန်ကြွေ သွားမှာ။ ဖောင်ကြီးဆန်တောင် မစားနိုင်ပဲနဲ့ ထောင်နှုတ်ခမ်းနင်းဦးမလို့လား။ ရယ်ချင်တယ်။
ကျွနင်္ုပ် ။ ဟုတ် ။ ဟုတ်။ သားသား ကြောက်ကြောက်ပါခင်ဗျ။ (တရုတ်ကလေးတွေခေါ်တဲ့ ကျောက်ကျောက် မဟုတ်ဘူးနော်) ဆရာကြီးကလည်း .. အနော်က ဘာတွေ လုပ်နေလို့တုန်းလို့။ ဟာပဲ .. ဟာပဲ။ ဟာဗျာ … ဟာဗျာ။
ဆော့ခရိတ္တိ ။ ငါတို့ အိုလံပပ်စ်တောင်တော်ကို နင်ရောက်နေတဲ့ အမ်းလို မှတ်နေလား။ ရေ၊ မီး၊ ဖုန်း၊ အင်တာနက် ၂၄ နာရီ။ ဒေါင်းချင်တိုင်းဒေါင်း ကောင်းမှကောင်း ကွန်နက်ရှင်နဲ့။ (နတ်တို့စံရာ တောင်တော်သာပေကိုး) ဖေ့စ်ဘုတ်ထဲ နင်ရေးထားတဲ့ ပေါက်တတ်ကရ အတွေးတွေကို ဟိုလူရှဲ ဒီလူရှဲနဲ့ ဗွက်ပေါက်နေတာ မသိပဲ ရှိပါ့မလား။ သောက်ညင်ကပ်လို့ မိတ်မဖွဲ့ ကွန်မန့်မပေးပဲနေတာ။ ဆွဲစိလိုက်လို့ နှဲမ်ိအနောက်က တန်းစီနေရမယ်။
ကျွနင်္ုပ် ။ ကြောက်ပါတယ် ဆိုနေမှပဲ။ မရှင်းတာကလေးတစ်ခုတော့ မေးစမ်းပါရစေဦးဗျာ။ ဆရာကြီးရဲ့ အဆိုအမိန့်တွေထဲမှာ `ရွှေတွေငွေတွေ၊ ရာထူးဌာနန္တရတွေရှိတာ ကောင်းတော့ကောင်းပါရဲ့။ဒါပေမယ့် အဲဒါတွေ ရရှိပိုင်ဆိုင်လာခြင်းဟာ မျှမျှတတ မှန်မှန်ကန်ကန်ဖြစ်ခြင်း ဆိုတဲ့သဘောမပါရင် ကျက်သရေ မင်္ဂလာရှိတဲ့ ကောင်းကျိုးချမ်းသာလို့ မဆို၊နိုင်ပေဘူး´ ဆိုတာကိုဖြင့် ခေတ်နဲ့ မလျှော်ညီတော့ဘူးလား လို့ သံသယဖြစ်မိပါတယ်။
ဆော့ခရိတ္တိ ။ ဒီသူတောင်းစားလေးကတော့ သူ့ဘာသာရိုက်ချင်တာ ငါ့ဆီတုတ်လာငှားနေပြီ။ ဒီအကြောင်းတွေက နင်သိသလို ငါသိသလို လူတကာအသိဟဲ့။ သူတို့ဘာသာလည်းသိပြီးသား။ မသိနားမလည်လို့ မလိမ္မာတခါမိုက်တယ်ထင်ပြီး တရားပြချင်နေတာလား။ သိသိကြီးနဲ့ လုပ်တယ်ကွာ။ ဘာဖြစ်သေးလဲ။ မင်းလိုပဲ သီချင်းဆိုပြလိုက်မယ်။ ` ချစ်လူမိုက် ချစ်လို့မိုက်ခဲ့တယ်…။ ချစ်လူမိုက် ချစ်လို့မိုက်ပါတယ် …။ ပြီးရော။
ကျွနင်္ုပ် ။ သဘောရိုး အမှန်ပါခင်ဗျာ။ ဆရာကြီးရဲ့ အေသင်မြို့သူမြို့သားတွေအပေါ် နောက်ဆုံးဝေဖန်ချက် `ပညာဥာဏ်နဲ့ အင်အားကြံ့ခိုင်မှုမှာ ကမ္ဘာကျော်ပါလျက် ငွေ၊ ဂုဏ် နဲ့ နံမည်နောက်ကို ကောက်ကောက်ပါနေတာ ရှက်စရာ၊ သစ္စာတရား၊ နားလည်မှုနဲ့ စိတ်ဝိညာဉ် ပြည့်စုံမှုကို မေ့လျော့ထားတာရှက်စရာ ´ ဆိုတာကလေးလည်း ရှင်းစမ်းပါဦး ခင်ဗျား။
ဆော့ခရိတ္တိ ။ သူ့အရိုးနဲ့ သူ့ပြန်ထိုးရတယ်ဆိုတဲ့ဗျူဟာအတိုင်း မင်းနားလည်လွယ်အောင် မင်းတို့ဆရာဝန်တွေထဲက ဥပမာနဲ့ပဲ ရှင်းပြမယ်။ သေသေချာချာ နားထောင်။ မင်းတို့ဆရာဝန်တွေဟာ ပညာဥာဏ်တွေ အတတ်ပညာပိုင်းတွေမှာ နိုင်ငံတကာက ဘယ်သူနဲ့ယှဉ်ယှဉ်၊မညံ့တဲ့လူတော်ကြီးတွေ တပုံတပင်ရှိတယ်လေ။သို့သော်ငြားလည်း သားတွေ သမီးတွေ အမေရိကားမှာ စင်္ကာပူမှာကျောင်းသွား ထားဖို့ ပူတူတူးလေးကို အိမ်တစ်ဆောင်မီးတစ်ပြောင်နဲ့ထားဖို့၊ ဒီလောကမှာ ငါကလွဲရင် ဘယ်သူမှ တတ်တဲ့သူမရှိစေရဘူးလို့ အောင်လံထူနိုင်ဖို့အတွက်နဲ့ ဟစ်ပိုခရိတ္တိကြီးရဲ့ အဆုံးအမတွေနဲ့ မလျှော်ညီ စွာ ကျင့်ကြံနေမိလို့ရှိရင် ရှက်စရာမကောင်းပါလား။ ကိုယ့်ဘာသာ စဉ်းစားကြည့်ပြီး သဘောပေါက်ရင် ပါးစပ်ပိတ်၊ တိတ်တိတ်နေတော့။ ငါ့တုန်းကတော့ ဒီစကားတစ်ခွန်းနဲ့တင် အပြစ်ရှိတယ်လို့ ပေးတဲ့မဲ ၂၈၀ ကျော် ရလိုက်ပါသဗျား။ ဝေဖန်ရေးဆိုတာ ကိုယ်ကဝေဖန်ရရင်သာ ကောင်းတာ။ ကိုယ့်ကိုဝေဖန်ခံရရင် ဘယ်သူမှ မကြိုက်ကြဘူးကွဲ့။ မှတ်နော်။ မှတ်နော်။ မှတ်နော်။
ကျွနင်္ုပ် ။ တခါဆို အိုအောင်မှတ်ပါ့မယ်ခင်ဗျာ။ နောက်ဆုံးမေးချင်တာတစ်ခုက ဆရာကြီးရဲ့ နောက်ဆုံး သြ၀ါဒထဲမှာ`ခွဲခွာရမည့်အချိန်ကား နီးလာချေပြီ။ ကိုယ့်လမ်းသို့ ကိုယ်စီ သွားရပေလိမ့်မည်။ ငါမူကား သေလမ်းသို့ သွားတော့အံ့။ သင်တပည့်တို့သည် ရှင်လမ်းသို့ သွားကြကုန်။ ရှင်လမ်းနှင့်သေလမ်း ဘယ် ဟာက သာ၍ကောင်းသည်ဆိုခြင်းကို ဘုရားသခင်တစ်ပါးတည်းသာ သိတော်မူပေလိမ့်မည်။” လို့ ဆိုခဲ့ တယ်မဟုတ်လား။အခုလောက်ဆို ဆရာကြီးဟာ ရှင်လမ်းရော သေလမ်းပါ နှစ်လမ်းလုံးလျှောက်ခဲ့ပြီးပြီ မို့ အတွေ့အကြုံကလေးများ အမိန့်ရှိပါဦး ခင်ဗျား။
ဆော့ခရိတ္တိ ။ ဒါကတော့ ဘယ်လိုရှင်နေသလဲ ဘယ်လိုသေသွားသလဲ ဆိုတဲ့အပေါ်မှာ မူတည်တာပေါ့ကွာ။ အနှစ်သာရမရှိတဲ့ ရှင်သန်ခြင်း၊ ပြည်သူအသိန်းအသောင်း အသင်္ချေရဲ့ အရိုးပုံပေါ်မှာ ရပ်တည်ရခြင်းဆိုရင်တော့ မင်းတို့ဆီက ဆီးဘန်းနီဆရာတော် ရေးခဲ့တဲ့အတိုင်း နေလိမ့်မယ်။ထန်းလျက်မြိုလို့ ချိုချင်ရင် လျှာဖျားကသာ ချိုနိုင်တော့မပေါ့ကွာ။ အကုသိုလ်စိတ်က ခြောက်လှန့်လာတဲ့အခါ အခေါဘဏီတပ်ကြီးရံထားပြီး ဘုံခုနှစ်ဆင့်ပေါ်တက်နေလည်း ဖိန့်ဖိန့် တုန်အောင် ကြောက်ကန်ကန်တတ်သေးတယ်။ ဒီလိုပဲ သေတဲ့အခါမှာလည်း သန်းခေါင်သန်းလွဲ ကာရာအိုကေမှာ အမုန်းဆွဲပြီး မူးမူးရူးရူးနဲ့အပြန် သူများကို ကားနဲ့တိုက်ရင်းသေသွားတဲ့သူနဲ့ ဦးဝိစာရတို့ ဗိုလ်အောင်ကျော်တို့လို သေခြင်းမျိုးဟာ ဘယ်တန်ဖိုးချင်းတူပါ့မလဲ။ သေပြီးနောက် မျက်မှောက်ပြုရတဲ့ လားရာဂတိချင်းလည်း မတူနိုင်ဘူးဆိုတာ မင်းတို့ ဗုဒ္ဓဘာသာတွေက ပိုသိဖို့ ကောင်းတာပေါ့။ တစ်ဘ၀ချမ်းသာကို တစ်သံသရာလုံးဝဋ်ကျွေးနဲ့လဲယူရတဲ့သူတွေလောက် မိုက် လုံးကြီးတာရှိဦးမလား။ အခုဆို ငါသေတာ နှစ်ပေါင်း နှစ်ထောင့်ငါးရာနီးလာပြီ။ ငါ့နံမယ် မင်းတို့ ကြားဖူးနေသေးတယ်။မသေခင်မှာ ကလော်တုပ် အပုပ်ချဖို့ကလွဲလို့ နံမည်တောင်စကားထဲထည့် မပြောချင်လောက်အောင် ပြည်သူ့မေတ္တာခံယူနေတာ မမြင်ဖူးလို့လား။ ဦးဇင်းကျော်ဟိန်းလေသံနဲ့ ဆက်ဟောလိုက်မယ်။ သိချင်သေးလို့ .. မေးနေတာလား....။
ကျွနင်္ုပ် ။ ရှင်းပါပြီ ဆရာကြီးရယ်။ ရှင်းပါပြီ။ အကွင်းအကွင်း မုန့်တီဟင်းလိုပါပဲ။ အမိုက်ခံပြီး ဇက်ကောင်းလို့ ဓါးတောင်းနေတာ မဟုတ်ရပါဘူး။ အနေလည်းတတ်၊ အသေလည်းမြတ်အောင် ဝေခွဲတတ်ကြပါစေကြောင်း သပ္ပုရိသအပေါင်းတို့ကို ဆရာကြီးရဲ့ သြ၀ါဒကထာကလေးများ ပြန်လည်ဝေငှလိုခြင်းကြောင့် ကူးတို့ဆိပ်က မှို့အိပ်ဖွင့်လိုက်ရပါတယ်။ လေတင်လေအောက် ကြားကြားသမျှ အမျှ အမျှ အမျှယူတော်မူကြကုန်။
လေချွန်နတ် ။ ၀ါး .... ဘာပြောသွားသေးတုန်း။
(ဟိုစဉ်အခါက ကိုရင်တာ၏ စတိုင်သစ်မဂ္ဂဇင်းလာ ဆိုခရိတ္တိ နှင့် နှစ်ပါးသွားခန်းကို ဖတ်အပြီး မနေနိုင်မထိုင်ဖြစ်လာပါသဖြင့် ငွေမြိုင်ကို တုတ်နှင့်ထိုးမိပြန်ပါကြောင်း။)
( ဖေ့စ်ဘွတ်မှာ ဒီလို Note မျိုးတွေ ဖတ်နေရတာ ဘယ်လောက် “တန်” သလဲဗျာ။ ရေးကြပါ၊ ဖတ်ကြပါ၊ Share ကြပါ။ “ဥ” မထားကြပါနဲ့ ။ )
“လေချွန်နတ်နှင့်တွေ့ဆုံခြင်း” ( Soe Min ဖေ့စ်ဘွတ် မှ ကူးယူဖော်ပြပါတယ် )
Posted by Andaman Hero at 5:52 PM0comments
andamanhero@gmail.com ကျနော်ဆီကို ဓါတ်ပုံများ၊ သတင်းများ ပေးပို့နိုင်ပါသည်ခင်ဗျား။ ပေးပို့ပေးသည့် သူများကိုလည်း ကျေးဇူးအထူး တင်ရှိပါကြောင်း ခင်ဗျား။
အင်ဒမန်ဟီးရိုး ရဲ့အကြောင်း တစေ့တစောင်း ........ အင်ဒမန်ဟီးရိုး ဟာအောင်ဆုရှင်၊အိုက်စံ၊ အိတ်စ်ဇိုင်းမာတလိ၊ အင်ဒမန်ဟီးရိုး စတဲ့ ကလောင် နာမည်တွေနဲ့ ရေဒီယို ပြဇာတ်၊ ဆောင်းပါး၊ ဟာသ နဲ့ ကဗျာ တွေကိုရေးသေးတယ်။ ရေးသားတဲ့ဝါသနာလေးကရှိနေတော့၊ကိုယ်ရေးတာတွေကိုတခြားသူတွေကိုလည်းမျှဝေခံစားစေချင်တယ်လေ။ ဒါတွေတင်ပဲလားဆိုတော့.. ဟီး .. ဟီး ..ကိုယ့်လိုပဲ၊လက်ယားနေတဲ့ကိုကို၊မမ ညီလေး၊ညီမလေးတွေရဲ့ဘလော့ဂ်တွေမှာရေးကြ၊သားကြတာတွေကို၊ကိုယ့်ရဲ့ ဘလော့ဂ်ဆီကိုအလည်ခေါ်လာပြီးတော့၊တခြားသူတွေနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးချင် တာလည်းပါတာပေါ့နော်။ ဂလို .. ဂလို သောအကြောင်းလေးတွေကြောင့်၊ အင်ဒမန်ဟီးရိုးတယောက် မြန်မာတွေရဲ့ဘလော့ဂ် လောကထဲကိုရောက်လာတာပေါ့။ ဘလော့ဂ် လို့ ပြောရင်၊ဆုံဆည်းရာကိုမေ့လို့ မရဘူးလေ။ အင်ဒမန်ဟီးရိုးရဲ့ ဘလော့ဂ်ကို၊ဆုံဆည်းရာ ကဖန်တီးပေးတာကိုး။ ဘလော့ဂ် လုပ်ဖြစ်အောင် အားပေးတာကတော့ ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ၊ ဘလော့ဂ်ဖြစ်လာပြန်တော့ ဆက်လုပ်လို့ အားပေးသူကတော့ ခင်မင်းဇော် အခုတော့ ဘလော့ဂ်မိတ်ဆွေတွေနဲ့ အတူ .. ဟိုး .. အရှေ့ ကမှုန်ဝါးဝါးမြင် နေရတဲ့ ဆီကိုသွားနေတယ်လေ …
ခါကာဘိုရာဇီ (မိုးကြိုး သတင်းစာ)
Mon News(IMNA )
စက်တင်ဘာ ၂၈ / ၉ / ၀၇ ရန်ကုန်ရွှေဝါရောင်မှတ်တမ်း